IMassimo Dutti iveza indlu entsha yokupapasha i-SS21: I-Edgy eNtsha | IBezzia
UMaria vazquez | 09/06/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
UMassimo Dutti kutshanje uveze entsha Intwasahlobo-ihlobo lowama-2021. Umhleli ophantsi kwesihloko esithi New Edgy usinika izindululo zosuku nosuku kwaye sabelane ngazo ezinye zihlelwe yinkampani ngaphambili ukuzibophelela kwiphalethi yendalo, nangona kukho amanqaku axabisekileyo.
Xa uqala ukujonga i-Edgy eNtsha, into yokuqala ebambe iliso lakho kukugqama kwezinto ezithile ezinxitywayo, ezinje ngeebhulukhwe ezimfutshane zelinen, tie iihempe zokuprinta kunye neehempe ezinemibala. Iimpahla ezenzelwe uyonwabele ihlobo kamnandi.
1 Iphalethi yombala
2 Iimpawu zeDayi zedayi
3 Izinto ezibalulekileyo zikaMassimo Dutti
Ukuziqhelanisa nokuhlela ngakumbi xa kufikwa kumbala, i Iphalethi yombala ebanzi apho ifemu ibhejele oku. Iphalethi yombala eqaqambileyo apho iithoni ezingathathi hlangothi zidityaniswe nezinye ezinamandla ezifana neeorenji, iipinki kunye nohlaza.
Iimpawu zeDayi zedayi
Kwindlu yoshicilelo apho uninzi lwempahla lucacile, ii-tie dye motifs aziyeki. Siyithanda kakhulu ihempe kunye nesiketi esetiwe emhlophe, emdaka kunye neblue tones ezenziwe ngomqhaphu kunye nelaphu lesilika. Kodwa nangakumbi ihempe yeetoni eziorenji kunye nepinki, ezenziwe ngelaphu le-ramie eli-100%.
Izinto ezibalulekileyo zikaMassimo Dutti
Las ibhanti yelinen yebhanti ezimfutshane baba yingubo ekufuneka yenziwe nguMassimo Dutti ngeli xesha lonyaka. Kwimibala engathathi hlangothi ixhaphake kakhulu, nangona kunjalo, asinakho ukuwasusa amehlo ethu kwimodeli ekhoyo eluhlaza kunye nemfusa kolu luhlelo. Kwaye siyayithanda imbono yokuyidibanisa nehempe kunye nejekethi enamabele aphindwe kabini.
I-Knitwear sesinye isitshixo ekuqokeleleni, ngakumbi izikethi ezithandelweyo kunye imiphezulu yeetanki. Kunye nezi zikwachaza iihempe ezingaphezulu kweehempe okanye iilokhwe ezisebenza njengengubo kwaye kwimibala efana ne-beige okanye i-khaki idityaniswa nayo yonke into.
Ngaba uyazithanda izindululo ezitsha ezivela kwiqela le-Inditex?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » UMassimo Dutti uveza indlu entsha yokupapasha i-SS21: I-Edgy entsha